Niala ny filoha Goatemalteka rehefa nivoaka ny didy fampisamborana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2015 7:37 GMT
Rehefa niala teo amin'ny toerana maha-filohan'i Goatemalà azy i Otto Pérez Molina dia nitolo-tena teo amin'ny fitsarana ary nalefan'ny mpitsara tany amponja mandrapivoaka ny fehinteny manaporofo ny anjara andraikiny amin'ny kolikolim-padintseranana aminà tapitrisa dolara. Sary nalaina avy amin'ny kaonty Flickr an'i Casa de Américas ambany lisansa Creative Commons.
Tsy filohan'i Goatemalà intsony i Otto Pérez Molina. Taorian'ny volana maro nidinana an-dalambe mitaky rariny sy mangarahara, dia nahazo vaovao maromaro tian-dry zareo ho heno ny Goatemalteka androany. Nametra-pialana ny filoha ary hogadraina mandra-pifaran'ny fihainoana ny raharahan-kolikoly goavana antsoina hoe La Linea (“Ny Tariby”) izay nitarika ihany koa tamin'ny fialan'i Roxana Baldetti filoha lefitra teo aloha.
Niala ny mpitondra an'i Goatemalà rehefa nivoaka ny didy fampisamborana azy
Tamin'ny alarobia 2 Septambra dia namoahan'ny mpitsara iray didy fampisamborana ny Filoha Goatemalteka Otto Pérez Molina, raha noesorina taminy ny tsy fahazoana mikasikasika azy tamin'ny alalan'ny fandrotsaham-baton'ny kongresy tsy nisy nitsipaka notontosaina ny 1 Septambra —sambany teo amin'ny tantaran'i Goatemalà ary sambany ihany koa tao Amerika Afovoany no nisy filoham-panjakana azon-tsampona tsy hanohy ny asany. Voampanga ho nanao firaisana tsikombakomba, fanaovana risoriso sy kolikolim-padintseranana izy.
Vaovao mafana: [Goatemalà] Mandidy ho amin'ny fisamborana ny filoha Otto Perez Molina ny lehiben'ny fampanoavana
Hatramin'ny fotoana farany i Pérez Molina no nikiry fa tsy hiala. Niova hevitra izy nandritra ny alina.
Tadidio fa mbola filoha i OPM [Otto Pérez Molina] mandra-panaovana azy hotazonina vonjimaika na mandra-paneken'ny Kongresy ny nametrahany ny taratasim-pialàna.
Neken'ny Kongresy androany ny fialàny ary araka ny Lalampanorenana Goatemalteka dia ny filoha lefitra amin'izao fotoana Alejandro Maldonado no hanao fianianana hanapitra ny fe-potoana iasan'i Pérez Molina, izay hifarana amin'ny Janoary, ary hanendry filoha lefitra vaovao ny kongresy, avy amin'ny lisitra apetraky ny Filoha Maldonado. Hiasa hatramin'ny 14 Janoary 2016 izay Filoha Lefitra voatendry eo.
Nanao fanazara-tena tao amin'ny Akademia Miaramilan'i Etazonia, ny Sekolin'ny Amerika Manontolo izy ary voatendry ho solontenan'ny Foloalindahy hanao ny Fifanarahama-Pandriamapahalemana, Votsotra tamin'i Pérez Molina tanteraka ny fanohanan'i Etazonia sy ny firaisamonina iraisampirenena, rehefa nivoaka ny filazana fa tafiditra tanatin'ny fifanaraham-pandraharahana mampiahiahy maro ny governemanta notarihany.
Feno fanajana tanteraka ny Goatemalteka ny mpikatroky ny zon'olombelona antserasera tahaka an'i Phil Neff tamin'ny fahitana ny fialan'i Pérez Molina eo amin'ny toerany:
Goatemalà: hatramin'ny fanamelohana mpitondra jadona teo aloha ka hatramin'ny fampisamborana filoha mbola eo amin'ny toerany. [manaja]
Hotontosaina ao anatin'ny 72 ora ny fifidianana ankapobe ary ho singa lehibe [mety mampiova ny toe-draharaha] ny fanambarana fisamborana an'i Pérez Molina. Hatramin'ny namoahan'ny Vaomiera Iraisampirenena Miady amin'ny Tsy Fisaziana tohanan'ny Firenena Mikambana tatitra manondro fa avy amin'ny tambajotran-jiolahy sy loharanom-bola tsy ara-dalàna ny ampahany betsaka amin'ny vola fanohanana ny fanentanana goatemalteka, dia mazava ho azy ny olompirenena raha niantso ny fahefana misahana ny fifidianana hampiato ny fifidianana ary hanao fanamarinana ny kaontin'ny kandidà rehetra.
Rehefa niala tamin'ny toerany sy naneken'ny Kongresy ny fialany dia niseho teo anatrehan'ny fitsarana hohenoina i Pérez Molina. Tao ny mpitsara no nanome baiko ny handefasana ny filoha teo aloha any amponja.